के युनाइटेडको अग्रता लामो समय टिक्न सक्ला ? – Talking Sports
के युनाइटेडको अग्रता लामो समय टिक्न सक्ला ?
इङ्गलिस प्रिमियर लिगको झण्डै आधा सिजन समाप्त हुदा म्यानचेस्टर युनाइटेडले शिर्ष स्थानमा लिभरपुलसँग स्पष्ट तीन अंकको अग्रता बनाएको छ । सिजनमा खराब शुरुवात गर्नुका साथै च्याम्पियन्स लिगमा पनि पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको युनाइटेड लिगमा भने बिस्तारै सम्हालिदै गएको देखिएको छ ।
तर सात सिजन अघि आफ्नो अन्तिम उपाधि जितेको युनाइटेड यो पटक उपाधिको दावेदार नै हो की दावेदार जस्तो देखिएको मात्रै हो ? के उसको अग्रता दिगो रहन सक्ला त ? कस्तो देखिएको छ युनाइटेड ?
एलेक्स फर्गुसनले २० औं प्रिमियर लिग उपाधि जिताएर क्लब छोडे यता युनाइटेडको ट्रान्सफर मार्केटको सफलताले निशाना भेट्टाउने भन्दा बढी चुकेको छ । तर मङ्गलवार टर्फ मुरमा बर्नलीलाई १–० ले पराजित गर्दा व्यवस्थापक ओले गुनार सोल्सायरको सब्स्टिच्युट बेन्च हेर्ने हो भने उनले लोभ लाग्दो बिकल्पसहितको बलियो टोली बनाएको देखिन्छ ।
मिडफिल्डमा पउल पोग्बा, निमान्जा माटिच र ब्रुनो फर्नान्डेसलाई लिएर शुरुवात गरेका नर्वेजियन सोल्सायरको बेन्चमा फर्ममै रहेका स्कट म्याकटोमिने, फ्रेड र डोनी भान डि बिक रहेका थिए ।
युनाइेटडमा अहिले बेञ्चमा पनि राम्रै बिकल्प रहेको देखिएको छ ।
तीन म्याचको प्रतिबन्धपछि एडिन्सन काभानी अग्रपक्तिको केन्द्रबिन्दुमा रहदा एकेडमीबाट आएका मेसन ग्रिनउडलाई ढिलो मैदानमा उतारिएको थियो । सेन्ट्रल डिफेन्समा एरिक बेली र ह्यारी मग्वायरले प्रभाव पार्दा युनाइटेड रक्षापंक्तिले पनि गति पाएको छ ।
तर युनाइटेडमा खेलाइएका खेलाडीहरुले भने ध्यान खिचिरहेका भने होइनन् । यो त केही दिन अघि एस्टन भिल्लालाई हराउदा टोलीले मनाएको उत्साहप्रद खुशीयालीले क्लबमा देखिएको आत्मीयताले प्रभाव पारिरहेको हो ।
खेलाडीको रुपमा ओल्ड ट्राफोर्डमा ६ प्रिमियर लिग उपाधि जितेका सोल्सायरको लागि युनाइटेडको यात्रा उनले क्लब सम्हालेदेखि कहिल्यै पनि सहज भएको छैन । जब–जब युनाइटेड खस्कदै जान थाल्छ सोल्सायर योर्गन क्लोप र पेप ग्वार्डियोलाको स्तरमा पुग्ने अनुभव नभएको भन्दै दवाबमा रहने गर्दछन् ।
खराब शुरुवातका बावजुद सम्भव रहेका ३३ बाट २९ अंक बटुल्न सक्नु युनाइटेडको पुनरागमन गर्न सक्ने मजबुती स्पष्ट झल्किएको छ तर सोल्सायर अहिल्यै भावनामा बग्ने मुडमा छैनन् ।
“सिजनको मध्यतिर आइसक्दा हामी अहिले जहाँ छौं त्यसले हामी कस्तो टोली हौं स्पष्ट पारेको छ । तर जनवरी १२ हामी जहा रहेको हो त्यो कुरा कसैले सम्झने छैनन्,” आफ्नो टोलीको उत्सुकत केही हदसम्म शान्त पार्ने क्रममा सोल्सायर भन्छन् ।
हाल उच्च फर्ममा देखिएपनि सट्टेबाजहरुले युनाइटेडलाई म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलपछि प्रिमियर लिगको उपाधिको दाबेदारको रुपमा तेश्रो स्थानमा राखेको छ । रक्षापंक्तिमा चोटले प्रभाव पार्दा अघिल्लो सिजनजस्तो तिब्र गति लिन नसकेपछि लिभरपुल अझै पनि उपाधिको समिकरणमा स्पष्ट रुपमा अगाडी रहेको देखिन्छ ।
सोल्सायर क्लोप र ग्वार्डियोलाको स्तरमा पुग्न अझै पनि अनुभवबिहिन नै छन् ।
अबको खेलमा चीर प्रतिद्वन्दी लिभरपुलको घरमा खेल्न जादा युनाइटेडको खुट्टामा स्प्रिङ्ग हुनेछ । कारण हो एक जितले पनि युनाइटेड ६ अंकको अग्रताका साथ शिर्ष स्थानमा पकड बनाउन सक्नेछ । अघिल्लो सिजन एन्फिल्डमा हार्न पुग्दा युनाइटेडले लिभरपुललाई ३० अंकको अग्रता बनाउने मौका दिएको थियो ।
घरेलु सिजनमा लिभरपुलसँग जनवरी २०२० मा पराजित भएयता एक अवे खेल पनि नहारेका सोल्सायर लिभरपुलको चुनौतिका लागि आफ्नो टोली तैयार रहेको मान्छन् । “हामी एन्फिल्ड पुग्दा इङ्गल्याण्डको एक मिलले नै उत्कृष्ट टोलीबिरुद्ध खेल्न गइरहेको ज्ञान हामीलाई रहनेछ । उनीहरु आफ्नो अधिकारले च्याम्पियन हुन् र त्यो खेल हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो परिक्षा हुनेछ,” सोल्सायरले भने ।
सिटी भने कसैलाई पत्तै नदिएर शिर्ष स्थानबाट केही दुरीमा मात्रै रहेको टोली बनिसकेको छ । युनाइटेडभन्दा सिटी सात अंकले पछि रहेको छ तर उसको हातमा अझै दुई खेल छ । सिटी चार सिजनमा तेश्रो उपाधि जित्ने प्रबल दाबेदारको रुपमा कायमै रहेको छ ।
ओल्ड ट्राफोर्डमा सोल्सायरसँगै खेलेका पुर्व युनाइटेड गोलकिपर पिटर स्मिकेल आफ्नो टोली उपाधि जित्न सक्षम रहे नरहेको बिश्वस्त नभएपनि त्यसको नजिक भने रहेको मान्छन् ।
“यदि हामीले डर्टमण्डबाट स्ट्राइकर हालान्ड (एर्लिङ) र लाइपजिगबाट डिफेन्टर डेयोट (उपमेकानो) जस्ता खेलाडी थप्न सक्ने हो भने म युनाइटेड प्रिमियर लिगको प्रबल दाबेदारको रुपमा मान्नेछु,” स्मिकेलले बिबिसिलाई भनेका छन् ।
स्मिकेललाई गलत साबित गर्ने उनका पुर्व मित्र सोल्सायरकै हातमा रहेको छ ।
बार्सिलोना स्पेनिस सुपर कपको फाइनलमा
‘अब म जर्मनीको लागि कहिल्यै पनि खेल्दिन’
एएफसी कपको प्ले अफमा आर्मीले श्रीलंका पुलिस विरुद्ध खेल्ने
एपिएफले पुलिसलाई बाहिर पठायो, आरिफको खुट्टा खोच्याउदै ब्याटिङ्ग
थोमस टुचेलः पावर गेम र दूरदर्शी
एपिएफले पुलिसलाई दियो २ सय ४ रनको चुनौतिपुर्ण लक्ष्य, आरिफ घाइते
प्रिमियर लिगमा सिटी यो सिजन पहिलो पटक शिर्षमा उक्लियो
पुर्व जर्मनी तथा आर्सनल मिडफिल्डर मेसुट ओजिलले अब आफू कहिल्यै पनि जर्मनीको लागि नखेल्ने बताएका छन् ।
बुधबार आफ्नो बाल्यकालको टर्किस क्लब फेनरबाचेसँग साढे तीन बर्षको सम्झौता गर्ने क्रममा ओजिलले जर्मनी प्रति आफ्नो फ्रस्टेसन पोख्ने क्रममा यस्तो भनेका हुन् । “म जर्मन टोलीलाई सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु तर अब देखि म कहिल्यै पनि उनीहरुको लागि खेल्दिन,” फरर टर्किस भाषामा कुरा गर्ने क्रममा ३२ बर्षिय ओजिलले भने ।
ओजिललाई फेनरबाचेले बुधबार नै क्लबको जर्सीमा सार्वजकि गरेको थियो । जर्मनीले २०१४ को बिश्वकप जित्दाका स्टार खेलाडी ओजिलले इङ्गलिस प्रिमियर लिग क्लब आर्सनलसँग तीन पटक एफए कप जितेका थिए ।
तर २०१८ को बिश्वकप अघि जर्मनीमा बिवादास्पद टर्किस राष्ट्रपति रिसेप तइप एर्दोगनसँग तस्विर लिएपछि उनी आलोचनाको शिकार हुन पुगेका थिए । ओजिलले टर्किमै बिहे गर्दा पनि एर्दोगनलाई बेष्ट म्यान बनाएका थिए ।
२०१८ को बिश्वकपमा समुह चरणबाट नै बाहिरिएपछि टर्किस मुलका ओजिलले आफूमाथि नश्लभेदीय टिप्पणी भएको भन्दै राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास नै लिएका थिए । २०१९ मा चिनको जिनियाङ प्रान्तमा उइगर मुस्लिम समुदायमाथि भएको बर्बरताको बिरोधमा बोले पछि उनी हप्ताको ३ लाख ५० हजार पाउण्ड लिएर सबैभन्दा महँगो खेलाडी रहेपनि आर्सनलका लागि निकै कम खेलेका थिए ।
आर्सनल आफैले ओजिलको बक्तब्याहरुबाट आफुलाई टाढा राख्दै आएको थियो । ओजिलले फेनरबाचेका लागि आफ्नो पहिलो खेल इस्तानबुल डर्बीमा गालातासारे बिरुद्ध खेल्न सक्नेछन् ।
रियल म्याड्रिड र आर्सनलमा हुँदा लिएको पैसा भन्दा फेनरबाचेमा निकै नै कममा अनुबन्ध भएका उनले एक सिजनको ३० लाख युरो कमाउने छन् ।
नेपाली ए डिभिजन लिग क्लब त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसी कप २०२१ को प्ले अफमा श्रीलंका पुलीस विरुद्ध खेल्ने तय भएको छ ।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार दक्षिण एसियाको प्ले अफमा आर्मीले श्रीलंका पुलिस विरुद्ध खेल्नु पर्ने छ । आर्मी र श्रीलंका पुलिसबीच अप्रिल ७ मा खेल हुने छ । आर्मीले उक्त खेलमा जित हात पारेको खण्डमा प्लेअफको दोस्रो खेलमा भारतको बेंगलुरु फुटबल क्लबसँग अप्रिल १४ मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
आर्मीले बेंगलुरु फुटबल क्लब विरुद्ध जित निकाले अप्रिल २१ मा हुने प्ले अफको फाइनल खेल खेल्नेछ । प्ले अफ जितेको खण्डमा आर्मीले एएफसी कप २०२१ को समुह डि मा स्थान पाउने छ ।
समुह डि मा भारतको एटीके मोहन बगान, बंगलादेशको बसुन्धरा किंग्स र माल्दिभ्सको माजिया एण्ड रिक्रिएसन रहेका छन् । एएफसी कप २०२१ का समुह चरणका खेलहरु मे १४ बाट सुरु हुने एसियाली फुटबल महासंघले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा देशको लिग बिजेताले खेल्ने भएपछि शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग बिजेता मच्छिन्द्र क्लबको ए लाइसेन्स नभएको कारण आर्मीले उसको स्थान लिएको हो । नेपाली ए डिभिजन लिग क्लबहरुमा हाल आर्मीसँग मात्र एसियन फुटबल कन्फेडेरेसनको ए लाइसेन्स रहेको छ । आर्मी लिगको उपबिजेता पनि हो ।
डिफेन्डिङ्ग च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।
आरिफ शेख खेल्न नसक्ने परिस्थितीबाट पनि मैदान फर्कदै बहादुरीपुर्वक ब्याटिङ्गमा आएको खेलमा पुलिस सेमिफाइनलमा नेपाल एपिएफ क्लबसँग ३० रनले पराजित भयो । पहिलो ब्याटिङ्ग गरेको एपिएफले ५० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा २ सय ३ रन बनाएको थियो । जवाफमा पुलिस ४९ दशमलव २ ओभरमा १ सय ७३ रनमै समेटियो ।
एपिएफको इनिङ्गसलाई झड्का दिने क्रममा लगातार १० ओभर बलिङ्ग गर्दै तीन विकेट लिएका आरिफ फिल्डिङ्गका क्रममा गोलीगाँठोको नराम्रो चोट लागेपछि एम्बुलेन्समै स्ट्रेचरमा राखेर हस्पिटल लगिएको थियो । उपचारपछि एम्बुलेन्समै मैदान फर्किएका आरिफ पुलिसले १ सय ५७ रनमा ८ विकेट गुमाउदा खुट्टा खोच्याउदै मैदानमा ब्याटिङ्ग गर्न आएका थिए ।
दुई चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै १६ रनमा आउट भएका आरिफको खेललाई दर्शकका साथै एपिएफका खेलाडीले पनि सराहना गरेका थिए । टप अर्डरले खराब शुरुवात गर्दा १५ रनमै तीन विकेट गुमाएको पुलिसलाई दिपेन्द्र सिँह ऐरि र अनिल साह (२१) ले ४६ रनको साझेदारी गर्दै सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए ।
तर एपिएफले चाहिएको समयमा विकेटहरु लिदै खेललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो । पवन शर्राफले पुलिसको लागि ६१ बलमा सर्वाधिक ४० रन बनाएका थिए भने टिमको अन्तिम आशाको रुपमा रहेका रशिद खानले ५१ ब्लमा ३४ रन बनाए । रशिदले तीन चौका र एक चौका हिर्काएका थिए । दिपेन्द्रले ६९ बलमा ३३ रन बनाए ।
एपिएफका लागि बायाँ हाते स्पिनर भुवन कार्कीले ९ दशमलव दुई ओभरमा मात्र २१ रन खर्चदै चार विकेट लिए । यस्तै कप्तान शरद भेषावकर, कमल सिँह ऐरि र अविनाश बोहोराले २–२ विकेट लिएका थिए ।
यसअघि आरिफले तीन विकेट लिएपछि पहिलो चार विकेट ४३ रनमै गुमाएको एपिएफलाई मिडल अर्डर र लोवर मिडल अर्डरले सम्हालेपछि सम्मानजनक योगफलतर्फ पुगेको थियो ।
संकटमा रहेको एपिएफलाई शंकर राना र सन्दिप जोराले ६४ रनको साझेदारी गर्दै सम्हालेका थिए । प्रतियोगितामा एपिएफ संकटमा रहदा टिमको ब्याटिङ्ग सम्हालेका जोराले ४३ बलमा तीन चौका र एक छक्काको मद्दतमा ३४ रन बनाए ।
शंकर र अमर सिँह रौटेला (४) आउट भएरपछि १ सय ४४ रनमा ७ विकेट गुमाएको एपिएफलाई भुवनले आठौं विकेटका लागि कमल सिँह ऐरि (१९) सँग ३८ रनको साझेदारी गर्दै २ सय रन नजिक पुर्याए । भुवनले ५६ बलमा दुई छक्का र एक चौकाको मद्दतमा ४२ रन बनाए ।
एपिएफका लागि शंकरले ९६ बलमा ४४ रन जोडेका थिए । उनको इनिङ्गसमा चार चौका सामेल थियो । आरिफले १० ओभरमा मात्र ३१ रन खर्चेर तीन विकेट लिएका थिए ।
बिराटनगरको पहिलो जितमा कुसुमको ह्याट्रीक
रियल र बार्सिलोना अझै पनि सर्वाधिक आम्दानी गर्ने क्लबको सुचिमा कायम
रेड कार्डले प्रतिबन्ध व्यहोरेका मेस्सी बार्सिलोना टोलीमा फर्किए
युएईका पुर्व कप्तान नाभिद र साइमन अनवरलाई आजीवन प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने